Card အားခန့် / ဆက်စပ်ပစ္စည်း ၏ UID Chip Modify နိုင်သလား 00 ဧရိယာ, ထပ်တလဲလဲမှာ Data UID Chip ရေးရန်, Repeatedly Write UID Code Chip, Repeatedly Write UID Number Chip, ထပ်တလဲလဲ UID Serial Number Chip ရေးရန်, ထောက်ပံ့ရေး UID Chip
UID Clone Chip, you can modify the0sector0ပိတ်ဆို့, you can modify the serial number, used for cloning access control cards and identification cards.
ISO / IEC နှင့်တွေ့ဆုံ 14443 TypeA စံချိန်စံညွှန်းများ
ဆက်သွယ်ရေး baud rate ကို: 106Kbit / s နဲ့
အလုပ်လုပ်အကွာအဝေး: 100mm ထက်မပို (အဆိုပါအင်တာနာနှင့်ဆက်စပ်သော)
အဆိုပါ EEPROM မှတ်ဉာဏ်တည်နေရာ 1k bytes ဖြစ်ပါတယ်သို့ကွဲပြား 16 ကဏ္ဍများ. တစ်ခုချင်းစီကိုကဏ္ဍသို့ကွဲပြား4၏လုပ်ကွက် 16 တစ်ဦးချင်းစီ bytes.
သိုလှောင်ယူနစ်မှ Access ကိုပြင်သာပြောင်းသာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီသုံးစွဲသူများကသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်
ဒေတာကိုဖျက်: >100,000 ကြိမ်
သုံးဆနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းယန္တရား (ISO / IEC DIS9798-2)
ဆက်သွယ်ရေးစဉ်အတွင်းအားလုံး data တွေကို Encrypt
တစ်ဦး hierarchical key ကိုသုံးပြီးစနစ်, တစ်ဦးချင်းစီကဏ္ဍအတွက်ရရှိနိုင်သော့နှစ်ခုသီးခြားအစုံရှိပါတယ်.
4-က byte ထူးခြားတဲ့နံပါတ်စဉ် (ISO / IEC အညီ 14443-3 ကက်စကိတ်အဆင့် 1)
Operating အပူချိန်: -25℃ ~ + 70 ℃
The UID card can be changed to the 00 area, and the serial number can be modified. The ordinary IC card has been solidified by the manufacturer. ထိုကွောငျ့, some IC card serial numbers used in the access control are used as identification cards, and UID chip cards are used for cloning access control cards and identification cards.
The UID cloning chip can be made into CR80 standard size access control card, coin tag, mobile phone sticker, keychain, လက်ပတ်, token and other shapes according to the project requirements.
We supply the YY080 model UID chip that conforms to the ISO/IEC 14443 TypeA protocol for contactless RF card chips. The chip hasastorage capacity of 1K bytes, an operating frequency of 13.56MHz, andaworking distance of no more than 10 စင်တီမီတာ. Supporting anti-collision function and triple mutual authentication mechanism, it isamulti-purpose low-cost non-contact RF card chip with high security and logic processing functions, which can be widely used in low-cost access control and identity card clone replication, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Various types of billing payment cards, access control and data acquisition systems.
I am interested in your product Supply UID Chip, ထပ်တလဲလဲမှာ Data UID Chip ရေးရန်, ထပ်တလဲလဲ UID Serial Number Chip ရေးရန်, ၏ UID Chip Modify နိုင်သလား 00 ဧရိယာ
prev: NFC ကို / RFID Shield အချက်ပြကတ် Holder, လုံခြုံရေးကဒ် Holder Blocking RFID
နောက်တစ်ခု: SMD ထုပ်ပိုး RFID Tag ကို Chip, SMD ထုပ်ပိုးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို Chip